Steelseries Arctis 1 Wireless Gaming Headset (Black)-1 ~ ICT.com.mm
HomeSteelseries Arctis 1 Wireless Gaming Headset (Black)-1
Steelseries Arctis 1 Wireless Gaming Headset (Black)-1
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Ultra-low latency lossless wireless for PC, PS4, Nintendo Switch, and Android Discord-certified ClearCast noise canceling detachable microphone Same high-performance speaker drivers as the award winning Arctis7Steel-reinforced headband... [Learn more]
Brand: SteelseriesFilter by: Gaming Headphones, Over-ear Headphones, SLMNG, USD, Wireless Headphones
Steelseries အမှတ်တံဆိပ် Arctis 1 Wireless Gaming Headset ဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Headset ဖြစ်ပေမဲ့ Gaming အဆင့် 2.4 GHz Wireless နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်လို့ အသံအရည်အသွေးလုံးဝကျဆင်းမှု ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ PC, PS4, Nintendo Switch နဲ့ Android ဖုန်း စတဲ့ Devices တွေအားလုံးနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Nintendo Switch နဲ့ Android ဖုန်းတွေကို ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ USB-C Wireless ကိရိယာလေးကို တပ်ဆင်အသုံးပြု ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပြီး PC, PS4 နဲ့ Xbox Controllers တွေလို USB-C မပါဝင်တဲ့ အခြား Gaming Devices တွေကို ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက် 3.5mm Audio Jack ကြိုးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဖြုတ်အတပ်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ Discord-certified မိုက်ကရိုဖုန်း ပါဝင်ပြီး နောက်ခံဆူညံသံတွေကို လျှော့ချဖယ်ရှားပေးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် Squad လိုက် ဂိမ်းကစားချိန်မှာ မိမိရဲ့ Teammates တွေနဲ့ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပြောဆိုဆက်သွယ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Headset မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ စပီကာတွေက အသံအရည်အသွေးအတွက် ဆုတံဆိပ်ရရှိခဲ့တဲ့ Arctis7Headset မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စွမ်းရည်မြင့်စပီကာတွေကိုပဲ တပ်ဆင်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသံအတိုး/အချဲ့၊ မိုက်ကရိုဖုန်းအဖွင့်အပိတ်နဲ့ သီချင်း Play/Pause ခလုတ်တွေကို နားကြပ်ပေါ်မှာတင် တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် အသုံးပြုရ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။ အသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် အံဝင်ခွင်ကျ တပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ကိုယ်ထည်ကို စတီးလ်နဲ့ အားဖြည့်ထားတဲ့အတွက် ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးကောင်း Gaming Headset တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
No pairing, no hassle. Gaming-grade 2.4 GHz wireless for lossless, ultra-low latency audio and chat on PC and PS4.Use the compact USB-C wireless dongle with your Nintendo Switch or Android phone for the same wireless audio and chat experience when you're on the move.
Steel-reinforced headband and Control